မတ်ေတာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သီတဂူဆရာတျော ဘုရားကွီး ရှငျးပွထားတာ ဖတျကွညျ့နျော – Daily Feed MM
မတ်ေတာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သီတဂူဆရာတျော ဘုရားကွီး ရှငျးပွထားတာ ဖတျကွညျ့နျော
Admin_John | May 11, 2020 | Knowledge | No Comments
မတ်ေတာဆိုတာ ဘာလဲ? ဆရာတျော ဘုရားကွီး ရှငျးပွထားတာ ဖတျကွညျ့လိုကျနျော……
မတ်ေတာဆိုတာ … ခဈြတာ မဟုတျဘူး။ သူတဈပါးတို့အား ဒုက်ခ မပေးဘူးဆိုတဲ့ စိတျထား။ သူတဈပါးတို့အတှကျ ကောငျးကြိုး ဆောငျရှကျမယျဆိုတဲ့ စိတျထား။
ကရုဏာဆိုတာ… ဘယျသူကိုမြှ မညှငျးဆဲဘူး။ ဘယျသူ ဒုက်ခ ရောကျရောကျ ငါ ကူညီစောငျ့ရှောကျမယျ ဆိုတဲ့စိတျထား။ဥပက်ေခာဆိုတာ… မကျြနှာလှဲ ခဲပဈလုပျတာ မဟုတျဘူး။ ဟနျခကျြညီအောငျ နတော။ကွောကျတဲ့ဘကျလညျး ရောကျပွီးတော့ မတုနျလှုပျနဲ့။ကွိုကျတဲ့ ဘကျလညျး ရောကျပွီးတော့ မတုနျလှုပျနဲ့။
အဲဒီအစှနျးနှဈခု လှတျအောငျ ရှောငျပွီး အလယျက နသှေားတာ။ ဥပက်ေခာ ဆိုတဲ့ ပုဒျကို အဘိဓမ်မာမှာ “မဇ်ဈတ်တာကာရ လက်ခဏာ” လို့ ဖှငျ့တယျ။
“မဇ်ဈတ်တ” ဆိုတာ Middle Wayပဲ။
အတှေးမှနျဖို့ရနျ … စှနျ့လှတျဖို့ တှေးပါ။ သူတဈပါး အကြိုးစီးပှား ဆောငျရှကျဖို့ တှေးပါ။ သူတဈပါးရဲ့ ဒုက်ခကို ပယျဖြောကျဖို့ စောငျ့ရှောကျဖို့ တှေးပါ။ အတှေးသုံးပါး အဲဒါကို “သမ်မာသင်ျကပ” လို့ ချေါတယျ။ကောငျးတယျ အကြိုးရှိတယျဆိုတဲ့ အလုပျသညျ စိတျကောငျးရှိတဲ့ အခါမှ လုပျဖွဈတာ။
မကောငျးဘူး အကြိုးမရှိဘူး ဆိုတဲ့ အလုပျသညျ စိတျကောငျးမရှိတဲ့ အခါတိုငျး လုပျဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျကောငျး ထားတယျဆိုတာ အဓိပ်ပါယျ သိပျရှိပါတယျ။
လူ့ဘဝ ဆိုတဲ့ ဘဝကောငျး တဈခုကို ရရှိနခြေိနျ မှာ အကငျြ့ကောငျး တှနေဲ့ တိုးတကျအောငျ လုပျကွ။
ဘဝကောငျးကို မသိရငျ အကငျြ့ကောငျး ကိုလညျး မကငျြ့မိတတျဘူး။ လူသားအားလုံးရဲ့ ပနျးတိုငျဟာ ဝိသုဒ်ဓိနဲ့ ဝိမုတ်တိပါပဲ။Purification – သနျ့ရှငျး စငျကွယျခွငျးကို “ဝိသုဒ်ဓိ” လို့ ချေါတယျ။Liberation – လှတျမွောကျခွငျးကို “ဝိမုတ်တိ” လို့ ချေါတယျ။သနျ့ရှငျးစငျကွယျခွငျး – Purification လှတျမွောကျခွငျး – Liberation ရဖို့အတှကျ ဘာလုပျရမလဲဆိုရငျ
We must follow the Dhamma. ဓမ်မကို လိုကျနာ ကငျြ့သုံးရမယျ။ ဓမ်မကို လိုကျနာ ကငျြ့သုံးတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျဟာ သနျ့ရှငျးသှားတယျ။ သနျ့ရှငျးလို့ရှိရငျ လှတျမွောကျသှားတယျ။မိမိကိုယျတိုငျ နိဗ်ဗာနျရောကျဖို့ထကျ မိမိကွောငျ့ သူတဈပါး စိတျသောက မဖွဈအောငျ နတေတျဖို့ ပိုအရေးကွီးတယျ။ အဲဒါ မွငျ့မွတျသော လူစှမျးကောငျးတို့ရဲ့ စိတျထားပဲ။
မေတ္တာဆိုတာ ဘာလဲ? ဆရာတော် ဘုရားကြီး ရှင်းပြထားတာ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်……
မေတ္တာဆိုတာ … ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူတစ်ပါးတို့အား ဒုက္ခ မပေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထား။ သူတစ်ပါးတို့အတွက် ကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထား။
ကရုဏာဆိုတာ… ဘယ်သူကိုမျှ မညှင်းဆဲဘူး။ ဘယ်သူ ဒုက္ခ ရောက်ရောက် ငါ ကူညီစောင့်ရှောက်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်ထား။ဥပေက္ခာဆိုတာ… မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဟန်ချက်ညီအောင် နေတာ။ကြောက်တဲ့ဘက်လည်း ရောက်ပြီးတော့ မတုန်လှုပ်နဲ့။ကြိုက်တဲ့ ဘက်လည်း ရောက်ပြီးတော့ မတုန်လှုပ်နဲ့။
အဲဒီအစွန်းနှစ်ခု လွတ်အောင် ရှောင်ပြီး အလယ်က နေသွားတာ။ ဥပေက္ခာ ဆိုတဲ့ ပုဒ်ကို အဘိဓမ္မာမှာ “မဇ္ဈတ္တာကာရ လက္ခဏာ” လို့ ဖွင့်တယ်။
“မဇ္ဈတ္တ” ဆိုတာ Middle Wayပဲ။
အတွေးမှန်ဖို့ရန် … စွန့်လွှတ်ဖို့ တွေးပါ။ သူတစ်ပါး အကျိုးစီးပွား ဆောင်ရွက်ဖို့ တွေးပါ။ သူတစ်ပါးရဲ့ ဒုက္ခကို ပယ်ဖျောက်ဖို့ စောင့်ရှောက်ဖို့ တွေးပါ။ အတွေးသုံးပါး အဲဒါကို “သမ္မာသင်္ကပ” လို့ ခေါ်တယ်။ကောင်းတယ် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်သည် စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ အခါမှ လုပ်ဖြစ်တာ။
မကောင်းဘူး အကျိုးမရှိဘူး ဆိုတဲ့ အလုပ်သည် စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ အခါတိုင်း လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ကောင်း ထားတယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် သိပ်ရှိပါတယ်။
လူ့ဘဝ ဆိုတဲ့ ဘဝကောင်း တစ်ခုကို ရရှိနေချိန် မှာ အကျင့်ကောင်း တွေနဲ့ တိုးတက်အောင် လုပ်ကြ။
ဘဝကောင်းကို မသိရင် အကျင့်ကောင်း ကိုလည်း မကျင့်မိတတ်ဘူး။ လူသားအားလုံးရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ ဝိမုတ္တိပါပဲ။Purification – သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်းကို “ဝိသုဒ္ဓိ” လို့ ခေါ်တယ်။Liberation – လွတ်မြောက်ခြင်းကို “ဝိမုတ္တိ” လို့ ခေါ်တယ်။သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း – Purification လွတ်မြောက်ခြင်း – Liberation ရဖို့အတွက် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်
We must follow the Dhamma. ဓမ္မကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမယ်။ ဓမ္မကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သန့်ရှင်းသွားတယ်။ သန့်ရှင်းလို့ရှိရင် လွတ်မြောက်သွားတယ်။မိမိကိုယ်တိုင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ထက် မိမိကြောင့် သူတစ်ပါး စိတ်သောက မဖြစ်အောင် နေတတ်ဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်။ အဲဒါ မြင့်မြတ်သော လူစွမ်းကောင်းတို့ရဲ့ စိတ်ထားပဲ။
မနကျ ဘုရားပနျးအိုးလဲတဲ့အခါ ဒါလေးတော့သိထားပါ